I-Blackmore Cottage - Ekhanyayo, Yesimanje, yaseScandinavia - I-Airbnb
I-Blackmore Cottage - Ekhanyayo, Yesimanje, yaseScandinavia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Hannah And Benjamin
U-Hannah And Benjamin Ungumbungazi ovelele
Iqanjwe ngesiqongo esihle kakhulu eHyalite Canyon, iBlackmore Cottage ilungele zonke izidingo zakho zohambo! Ikhaya lesimanje elakhiwe ngo-2020 elinesakhiwo esisebenza kahle kakhulu. Ukuhlunga okukhanyayo, ukukhanya kwemvelo kuwo wonke amawindi awo amaningi. Endaweni enokuthula yaseBozeman. Ukushushuluza eqhweni okuncane noma inkambu yokuhamba izintaba enamandla okupheka ukuze uqhubekisele phambili uhambo lwakho olulandelayo. Eduze kakhulu nesikhumulo sezindiza. Imibhede yendlovukazi enethezeke kakhulu kanye nezingubo zokulala ezengeziwe ukuze ifudumale ngangokunokwenzeka.
Leli khaya elihle, elihlangene, elinomndeni owodwa linamathani amawindi nokukhanya kwemvelo. Uhlelo olusebenzayo, olunezitezi ezimbili. Ihlotshiswe kahle. I-Scandinavian enamacebo we-Hygge. Ukuthungwa kwemvelo nemibala engathathi hlangothi kuhlanganisa umuzwa opholile, okhululeke kakhulu. Ngokukhethekile i-Bozeman decor namamephu. Umklamo wesimanje wendlu uhlotshiswe ngezitebhisi ezintantayo ezenziwe ngokhuni nensimbi eshiselwe, yokuhlobisa. I-Patio ehlezi ehlobo enokubukwa okuthile kwama-Bridgers.
4.92 · 122 okushiwo abanye
Indawo ethule kakhulu ene-traffic encane-kuya-nomgwaqo kanye namapaki amadolobha ama-5 ngaphakathi kwebanga lokuhamba (1/2 mile). IDowntown Belgrade iqhele ngamabhlokhi ayi-10 njengendawo yokuphisa utshwala, i-distillery, izindawo zokudlela, amagalaji kaphethiloli, izitolo zekhofi, nezitolo zegrosa.
Ibungazwe ngu-Hannah And Benjamin
Adventurous couple with a hankering for new experiences, delicious food, beautiful hikes and ski hills.
Abanikazi bayasabela futhi ngokuvamile batholakala ezivakashini ngemibuzo! Zizwe ukhululekile ukubuza mayelana nokuthi ungashushuluza kuphi, uqwale, ucwilise noma udle kuphi!
UHannah And Benjamin Ungumbungazi ovelele